Kazakhstana: Mpilalao Pôlitika Novàna Toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2018 6:51 GMT
“Afaka manadino ny fampanantenana rehetra nataon'i Kazakhstana momba ny fametrahana ny demokrasia ireo manampahefana ao amin'ny OSCE. Ny fampanantenana rehetra, takalon'ny nahazoanay ny vatonareo hakanay ny fitantanana. Ho an'ireo sasany aminareo izay manana olana amin'ny fahatakarana izany, nanazava maina be tao anaty sntdsfs ho an'ny Reuters ny filohan'i Kazakhstana: “Voafidy ho mpikambana tanteraka ao anatin'ny Fikambanana izahay, ary tsy manana fampanantenana hafa na dia kely aza”, hoy i Arseny nanoratra ao amin'ny neweurasia
Kanefa, tsy tena tsiambaratelo ho an'ny ankamaroan'ny Kazakhstana ny hoe tsy hiraharaha ny OSCE ny governemantany ary hiala bàla amin'ny fanavaozana. Izay no mahatonga ny fanovàna toerana ny ben'ny tanàna tamin'ireo tanàna lehibe anankiroa ho olana fotora tao anaty fandaharampotoana. Nataon'ny Fampitàna ny Afo Olimpika tonga alohan'ny fotoana ao Almaty, renivohitra taloha, tanàna lehibe indrindra ary foiben'ny raharahambarotra. Tanàna voalohany i Almaty teo amin'ny hazakazaka erantany ho an'ny fanilo, ary nakarakarain'ny fitantanan'ny Almaty tsara ny lanonana, nitondra “zavatra mahaliana be ho an'ny ankamaroan'ny Almatiana”, nitatitra i Adam.
“Imangali, halahelo anao izahay”, hoy i dass. “Vao nanomboka ny nifalifaly mihitsy aho, dia lasa ny ben'ny tanàna”, tezitra koa i ehot [ros]. Ny tena olana mampiasa saina ny mponina ao an-tanàna dia ny hoe mety hahena daholo ireo fandraisana an-tànana ho fampandrosoana rehefa eo ambany fitondràn'ny ben'ny tanàna vaovao – minisitra taloha nisahana ny toekarena ambanivohitra, Ahmetjan Yesimov, solontenan'ny atao hoe “mpiambina tranainy” ary, araky ny tsaho, zanakin'ny iray tampo amin'ny filoha Nazarbayev :
“Raha raisina anaty kajy ny loza be ao amin'ny toekarenan'ny ambanivohitra ao amin'ny firenena, tena matahotra be ho an'ny hoavin'ity tanànantsika ity aho”, nizara ny tebitebiny i pulemetchizza [ros].
.Mandritra izay fotoana izay, mahita ny fanovàna toerana ao amin'ny governemanta ho toy ny fisondrotana ho an'i Tasmagambetov ny ankamaroan'ny bilaogera. Niteny i Kolobol avy ao amin'ny zakon.kz: “Imangali no filohantsika manaraka, raha ny fahitàna azy”. Raha jerena ny fitsampankevitra natao teo anivon'ny vahoaka, hinoana fa ny ben'ny tanànan'i Almaty taloha no mpanao pôlitika faharoa manampahefana indrindra ao amin'ny firenena – faharoa eo manaraka ny filoha. Manipika ity zava-misy manaraka ity i Megakhuimyak:
Mahaliana fa nisy fisehoanjavatra iray nialoha an'ilay fanovàna toerana. Nisamborin'ny pôlisin-ketra noho ny resaka kolikoly ny Lehiben'ny Kazakhstan Railways, orinasan'ny fanjakana. Tsy mino ny mpijery fa rangahy miaraka amin'ny fahaizana ambony sy minisitry ny toekarena teo aloha no voasambotra taminà vola kely 100.000 dollara teo akaikin'ny tranony. Ataon’ i Sarimov safobemantsina: “Vetivety sy toy ny namboarina mialoha ireo fanovàna toerana rehetra (ben'ny tanàna taloha tao Astana lasa lohan'ny Railways), ka tahaky ny toe-javatra mety tsara ilay raharahan'ny lehiben'ny Railways” [ru]
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, maneho ny heviny mahakasika ny fomba fijerin'ny “fanoherana voafehy” i sarimov:
3 andro izayArmenia